Ikhabhinethi yeeplanga ezindleleni zeentaba - I-Airbnb
Ikhabhinethi yeeplanga ezindleleni zeentaba
Le ndlu yelog yenzelwe usapho lwam nakwizizukulwana ezizayo. Uya kulonwabela eli khaya njengendawo efanelekileyo yokufihla iholide ebekwe ezintabeni ngombono weLolo Creek kunye neLolo Peak ngelixa ukufutshane neendawo zanamhlanje.
Eli khaya lelog lihlala kwiihektare ezingama-48 zomhlaba ubukhulu becala umhlaba osezintabeni, imithi, kunye namahashe ambalwa. Indlu yezigodo ikufuphi kwaye ikufuphi nendlu enkulu apho mna nomyeni wam sihlala khona, kodwa sahluke ngokupheleleyo. Ipropathi ingaphandle kweHighway 12 ukuze ukwazi ukufikelela ngokulula kwiidolophu ezikufutshane, iibhari, kunye nezinto ezinomtsalane zalapha ekhaya. Zininzi iindlela zokuhamba ukuze uzijonge kufutshane. Kukho indlela yokuhamba ngeenyawo ngasemva kwepropathi kwaye wamkelekile ukuba ujonge.
Kukho isitovu seglasi sepropane esigcina indawo ikhululekile kakhulu ngexesha lokubanda.
4.95 out of 5 stars from 613 reviews
4.95 · Izimvo eziyi-613
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi613
Indawo yam yindlela entle yokuphelisa ukuqhuba kwakho, ukuphumla nokulala ukuba unezicwangciso zokuya eGlacier National Park okanye eYellowstone National Park. Okanye unokonwabela ikhabhinethi ngokwayo. Unokuba noxolo noxolo ukuba uyafuna .
Le ndawo yahlukile kuba isondele kakhulu kwiindawo ezihlala rhoqo ezifana nezi:
- Lolo Creek Steak House - Kuhola wendlela 12 entshona, isiqingatha semayile ukusuka eLolo. Endleleni esiza kwam.
-Lolo Hot Springs-Yonwabele ukufunxwa. Kwakhona khangela iwebhusayithi yabo ngezinye izinto
ukwenza njengokuhamba kwekhephu ebusika, ukukhwela ihashe ehlotyeni, ukukhwela intaba
>Iziphethu ezishushu zikaJerry Johnson- ungayifumana kuGoogle ngolwazi oluthe kratya. Kudinga ukuhamba intaba ukuya apho.
Sineemephu, iincwadana ezinemifanekiso yokubona, ulwazi olushicilelweyo, njl
Zive ukhululekile ukubuza ukuba ufuna umkhomba-ndlela okanye izinto onokuzenza kwindawo leyo.
> ILolo Pass - ibonelela ngeendlela ezininzi zokuhamba intaba, ukutyibiliza ekhephini, ukutyibiliza, ukutyibiliza,
Ukuhamba ngekhephu, ukukhwela ibhayisekile entabeni. Unokwenza oku, iimvume zemozulu, xa kukho inyanga epheleleyo. Yima kwakhona kwiZiko leeNdwendwe lase-Idaho ukuze ufumane izinto ezininzi onokuthi uzenze.
- Jack Saloon (eveliswe kwimuvi ethi "Ezona Bars zigqwesileyo eMelika"). Kwakhona yindawo yokutya.
- Lochsa River / Lodge - inikeza Class 3-4 umlambo rafting entwasahlobo nasehlotyeni. Pls khangela iwebhusayithi yabo.
- Lochsa Lodge - ikwayindawo yokutyela
Mna nomyeni wam sihlala kwindlu enkulu ekufuphi, kufutshane nendlu enkulu. Siyakuthanda ukuncokola kunye nokundwendwela nawe ukuba uyafuna kodwa siyalihlonipha kwaye silixabisile ixesha lakho kunye nemfihlo ngaxeshanye. Ndisaxakekile ndisebenza ndingena ndiphuma endlini. Ukuba ndiyafumaneka, wamkelekile ngakumbi ukuba usebenzise izinto eziluncedo zendlu enje ngewasha / isomisi okanye i-Intanethi ukunceda ukwenza ukuhlala kwakho kube mnandi ngakumbi.
Mna nomyeni wam sihlala kwindlu enkulu ekufuphi, kufutshane nendlu enkulu. Siyakuthanda ukuncokola kunye nokundwendwela nawe ukuba uyafuna kodwa siyalihlonipha kwaye silixabisile i…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lolo